काठमाडौं, १३ भदौ । सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत जारी गराउन लागेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यादेश २०६९ को आतङ्कपीडित टुहुरा समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानले विरोध गरेका छन् । दुवै संस्थाले बुधवार अलगअलग विज्ञप्ति जारी गरी यसको विरोध गरेका हुन् । भदौ ११ गते बसेको मन्त्...
स्वार्थका कारण सहमति ओझेलमा : सिटौला
काठमाडौं १३, भदौ । नेपाली काङ्गे्रसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले राष्ट्रको स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका कारण सहमति बत्र नसकेको बताएका छन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्कूल समन्वय समिति डोटीको आयोजनामा विद्यार्थी नेता धर्मदेव फुलाराद्वारा लिखित &ls...
भदौ १३, भक्तपुर । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस एकाइ समितिले क्याम्पस प्रमुख शङ्करकुमार उपाध्यायको कार्यकक्षमा बुधवार तालाबन्दी गरेको छ । क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायको पुनर्बहालीको विरोध गर्दै नेविसङ्घले तालाबन्दी गरेको एकाइ समितिका अध्यक्ष प्रवीण लाखेले बताए । नेविसङ्घले प्रमुख उपाध्...
एक प्रहरीलाई ४ सय १५ जनाको सुरक्षा जिम्मा
भदौ १३, सुर्खेत (अस) । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रअन्तर्गत रहेका प्रहरी प्रमुखहरूले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा काम गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मङ्गलवार भएको मध्यपश्चिमाञ्चल स्तरीय क्षेत्रीय सम्मेलनमा आएका प्रहरी प्रमुखहरूले आवश्यक जनशक्ति र सवारीसाधनको अभावमा सोचेअनुरूप सेवा...
प्रम भट्टराई इरानतर्फ
भदौ १३, काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई इरानको राजधानी तेहरानमा हुने असंलग्न आन्दोलनको १६औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बुधवार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नतृत्व गरेका छन् । इरान जानुपूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालले...
टान पश्चिमाञ्चलमा सापकोटा
भदौ १३, पोखरा (अस) । ट्रेकिङ एजेण्ट्स एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घ पोखराको अध्यक्षमा नारायणप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको मङ्गलवार पोखरामा सम्पत्र १९औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनबाट सापकोटा अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । त्यस्तै सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षम...
हान बाँकेको अध्यक्षमा पाण्डे
भदौ १३, नेपालगञ्ज (अस) । होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) बाँकेको अध्यक्षमा जर्नादन पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । आगामी तीनवर्षे कार्यकालका लागि मङ्गलवार भएको निर्वाचनमा पाण्डे २ सय ३९ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । पाण्डेका प्रतिद्वन्द्वी प्रेमलाल सापकोटाले १ सय ६१ मत पाएका थिए । निर्वाचन समितिका संयोजक हरि ज्...
‘कस्सिएका मुठीसँग हात मिलाउन सकिएन’
भदौ १२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अन्य राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण संविधानसभा विघटन हुन पुगेको बताएका छन् । आफ्नो सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मङ्गलवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै संविधानसभाको म्याद थप गरी संविधान जारी गर्नका लागि सहमति जुटाउन आफू दलका नेताका दैलो...
आज चारदलको बैठक बस्ने
भदौ १२, काठमाडौं (अस) । शान्ति संविधान र राजनीतिक सङ्कटको निकास निकाल्ने उद्देश्यले बुधवार चार दलबीच वार्ता हुने भएको छ । राजनीतिक सहमति निकाल्न संयोजकको जिम्मेवारी पाएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटी यसको ज...
नायक भनेका महाखलनायक निस्के : गजुरेल
भदौ १२, दाङ (अस) । नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले पुष्पकमल दाहाललाई नायक बनाउन खोज्दाखोज्दै महाखलनायक बत्र पुगेको बताएका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घ दाङले मङ्गलवार दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा गजुरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधानसभाको सबैभन्दा ठू...
तथ्यांकोवाच : बंगलादेशमा रू. ३ अर्ब ५२ करोडको लसुन आयात
‘भारतीय सहयोग कटौतीले नेपालको विकासमा प्रभाव’
बीमालेख धितो कर्जा ५७% ले बढ्यो
चीनसँग जोडिएका नाका खुल्न अझै केही समय लाग्ने